Faahfaahin Qarax ka dhacay Gaalkacyo - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Faahfaahin Qarax ka dhacay Gaalkacyo
Qarax ayaa goor dhow ka dhacay Magaalada Gaalkacyo gaar ahaan meel u dhow Hoteelka Embassy ee Galmudug ka dib markii kooxo hubeysan ay isku soo xireen waxyaabaha qarxa.
Ciidanka Booliska ayaa xaqiijiyay in ay dileen Saddex qof oo isku soo xiray waxybaaha qarxa oo doonayay in ay isku qarxiyaan magaalada Gaalkacyo, islamarkaana Shacabka aysan soo gaarin wax khasaare ah.
Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in qaraxyaddaasi in ciidanka Ammaanka ay fashiliyeen.
“3 naftood-halige, oo qaraxsiday ayaa qorsheeynayay inay is qarxiyaan, ayeey ka hortageen Ciidanka Boliiska Magaalada Gaalkacyo, Xaafada Wadajir agagaarka Hotel AMBAS dhanka Galmudug, Argagaixisada oo dhamaan goobta lagu dilay” ayuu yiri Afhayeenka ciidanka booliska.
Previous articleTallaalka Covid-19 oo lagu baaqay in isbadel lagu sameeyo
Next articleRa’iisul Wasaaraha Israa’iil oo ka hadlay dagaalka & duqeymaha